१ नम्बर बन्‍ने ‘नयाँ पत्रिका’ को महत्वाकांक्षा : ५ रुपैयाँ मूल्य घट्यो – Media Kurakani
July 14th, 2018 Media Kurakani Media News
नयाँ पत्रिका दैनिकले पत्रिकाको मूल्य ५ रुपैयाँ घटाएको छ। संविधान घोषणासँगै भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि ५ रुपैयाँबाट १० रुपैयाँ मूल्य बनाएको नयाँ पत्रिकाले आज प्रकाशकीय छापेर मूल्य घटाएको हो।
हरेक घरमा नयाँ पत्रिका पुर्‍याउने पुर्‍याउने योजनासहित उसले ‘केही साताभित्रै नयाँ पत्रिका छापा माध्यमको इतिहासमै नेपालको सबैभन्दा बढी विक्री हुने पत्रिका बन्ने’ विश्वास व्यक्त गरेको छ।
नयाँ प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कृष्णज्वाला देवकोटाले शनिबार प्रकाशित प्रकाशकीयमा भनेका छन्-
असंख्य पाठकको प्रेमले पछिल्लो समय देशको सबैभन्दा लोकप्रिय पत्रिका बन्न सफल ‘नयाँ पत्रिका’ राष्ट्रिय दैनिक अब केवल रु. ५ मा किन्न सकिनेछ । ‘नयाँ पत्रिका’को सफलताको वास्तविक हकदार पाठक नै हुनुहुन्छ । मूल्य घटाएर हामीले हाम्रो सफलतामा पाठकलाई पनि हिस्सेदार बनाएका छौँ । ‘हरेक घरमा नयाँ पत्रिका’ हाम्रो अहिलेको संकल्प हो । हामीलाई विश्वास छ, केही साताभित्रै ‘नयाँ पत्रिका’ छापा माध्यमको इतिहासमै नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पत्रिका बन्नेछ ।
संयोग नै भन्नुपर्छ- मुलुकको सबैभन्दा बढी विक्री हुने पत्रिका ‘कान्तिपुर’ मा सम्पादकीय नेतृत्व हेरफेरसँगै अन्य परिवर्तनहरू देखिएका बेला नयाँ पत्रिकाले महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको हो। कान्तिपुरमा भारतीय लगानी आदिको चर्चा/हल्ला भइरहँदा नयाँ पत्रिकाले विज्ञापनमा लेखेको छ- ‘नेपालीको पत्रिका…….।’
नाकाबन्दी लगत्तै नयाँ पत्रिकाले ‘अप्रिय तर विवस निर्णय’ शीर्षकमा प्रकाशकीय छापेर मूल्य बढाएको थियो।
के सम्भव छ ?
पत्रिका छाप्ने कागज (न्युजप्रिन्ट) को मूल्य ४० प्रतिशत सम्म बढेको छ। काठमाडौंबाट छापिने प्रमुख पत्रिकाहरू १० रुपैयाँमा विक्री भइरहेका छन्। काठमाडौंबाहिर विभिन्न सहरहरूबाट प्रकाशित स्थानीय तथा क्षेत्रीय पत्रपत्रिकाहरू समेत उत्पादन लागतका कारण १० रुपैयाँ मूल्य राख्न बाध्य छन्।
यस्तो स्थितिमा नयाँ पत्रिकाको यो निर्णय दीर्घकालसम्म लागू गर्न कत्तिको सहज होला ?
‘संस्थाका हिसाबले यो निर्णय पक्कै चुनौतीपूर्ण छ। पछिल्ला दिनमा कागजको मूल्य करिब ४० प्रतिशत बढेको छ। तर, विज्ञापनको दायरा फराकिलो बनाएर पाठकलाई सहुलियत दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ‘, नयाँ पत्रिकाले भनेको छ।
‘निश्चय नै नयाँ पत्रिका टिम महत्वाकांक्षी छ’, प्रकाशकीयमा भनिएको छ, ‘सातै प्रदेशबाट प्रादेशिक संस्करण सुरु गर्ने पहिलो राष्ट्रिय दैनिक बन्दा पनि हामी चुनौतीकै सामना गर्दै थियौँ। र, आज मूल्य घटाउने निर्णय पनि झन् चुनौतीपूर्ण छ।‘
पाठकको सद्भाव भएसम्म यस्ता धेरै चुनौती सामना गर्न तयार रहेको भन्दै नयाँ पत्रिकाले ‘थोरै मूल्यमा उत्कृष्ट पत्रिका आफ्नो संकल्प रहेको’ दावी गरेको छ। नयाँ पत्रिकाले एक वर्षभित्र टेलिभिजन प्रकाशरणमा ल्याउने घोषणा गत वार्षिकोत्सवमा गरेको थियो।
तीन ब्रोडसिड दैनिक कान्तिपुर, नागरिक र अन्नपूर्ण पोस्टले २०६८ मंसिर २८ गतेदेखि कार्टेलिङ गरी एकैपटक ५ रुपैयाँबाट १० रुपैयाँ मूल्य बनाएका थिए।
अहिले ‘राजधानी’ दैनिकको मूल्य पनि ५ रुपैयाँ नै छ।*
मिडिया विश्लेषक भानुभक्त आचार्यले अखबारको मूल्य निर्धारण गर्ने सवालमा नयाँ पत्रिकाले चालेको कदमलाई ‘paradigm shift’ भनेका छन्।
*यसअघि ‘नेपाल समाचारपत्र’ को मूल्य ५ उल्लेखभएकोमा भूलसुधारसहित सच्याइएको। ‘नेपाल समाचारपत्र’को मूल्य रु १० छ।
Tags Krishna Jwala Devkota Naya Patrika Price War
१० वर्षपछि कान्तिपुरमा नारायण वाग्लेको ‘कमब्याक’ »
« ‘आर्थिक अभियान’ ले भन्यो : ‘प्रिन्ट मिस्टेक हुँदा सम्पादकको नाम हट्यो’ #Update
krishna Devkota (#)
LeaveaReply to krishna Devkota Cancel reply